"भोकको भाइरस" बजारमा ! - Bulbul Samachar
bulbul शनिवार, मंसिर ११ गते 122 views
कवि जीविका अश्रुद्वारा लिखित ‘भोकको भाइरस’ कवितासङ्ग्रह विराटनगरमा विचोचन गरिएको छ ।
विराटनगरस्थित राष्ट्रसेवक सहकारी संस्थाले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा साहित्यकार सरला चापागाईं, रामबाबु दाहाल, आयोजक संस्थाका अध्यक्ष जीवन काफ्लेलगायतले संयुक्त रुपमा कवितासङ्ग्रह विमोचन गरेका थिए ।
विमोचित कृतिका विषयमा डा. विशालबाबु बस्नेत र डा. लक्ष्मण खनालले समीक्षा गरे । बिराटनगरकी स्थानीय भएपनि हाल सिक्किममा बसेर साहित्य सेवा गरिरहेकी अश्रुको संग्रहमा विभिन्न शीर्षकका ४५ वटा कविता संग्रहित छन् ।